လူမျိုးကြီးဝါဒ မြန်မာပြည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » လူမျိုးကြီးဝါဒ မြန်မာပြည်
Posted by Mg Ogga on Dec 13, 2011 in Arts & Humanities | 28 comments
မြန်မာပြည်က..ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေထဲ.. ဘာသာရေးခွဲခြားဖိနှိပ်မှု အများဆုံးနိုင်ငံ ၃နိုင်ငံထဲပါတယ်..။
အယူအဆမတူရင်.. ၀ိုင်းနှိပ်ကွပ်ယုံတင်မဟုတ.်…အာဏာပိုင်နဲ့ပေါင်းပြီး..ထောင်ချ.. သတ်တာမျိုးအထိ..လွယ်လွယ်နဲ့လုပ်တတ်တယ်..။
ပြီးတော့.. ဗုဒ္ဓဘာသာကို.. မြန်မာကပဲပိုင်သလိုလို…လို…။
တိုင်းရင်းသားတွေကိုတော့.. သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အစိုးရတွေက.. လုပ်ခဲ့တဲ့… အမှားအယွင်းတွေဝန်ချတောင်းပန်တာ.. ကျေးဇူးတင်တာမျိုးအတွက်.. နေ့ရက်သတ်မှတ်လုပ်ပေးသင့်တယ်ထင်ပါကြောင်း…
kai ရေ အဲဒိီလိုကြေးဆိုရင် ပါကစ်တို့ဖိလစ်ပင်းတို့မလေးတို့အီရန်တို့ မှာနေဖူးလားလို့ မေးရမှာပဲ မမလေူပြောသလို ဗုဒ္ဓဘာသာမပာုတ်လို့ ထောင်ချခံရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် မြန်မာပြည်မှာ ရ်ှရင် ပြောပေးပါဦး ကျတော် ခဗျားလေးရဲ့ဘာသာထဲ ၀င်ပေးပါမယ်
ဘူးသီးတောင်တို့ မောင်တောတို့ မှာ ပလူပျံနေတဲ့ ဗလီတွေ ဆူးလေဘုရားနားမှာ ဘုရားထက်ကို မြင့်တော့မတတ် church ကြီးနဲ့ လူ့ အခွင့်အရေးဘန်းပြပြီး ခြေလှမ်းကြဲကြဲနဲ့ ရောဝင်လာတဲ့ ခဗျားလေးတို့ ရဲ့ အကွက်တွေကလေ … ရိုး…နေပါပြီဗျာ ပြီးခဲ့တဲ့ သင်္ကြန်လောက်က ဒီနိုင်ငံကို ခရစ်ယာန် နိုင်ငံဖြစ်ရေး အထူးကြိူးပမ်းနေတဲ့ စင်ကာပူက ဖာသာကြီး လာပြီး (ဘာတွေလုပ်သွားတယ် ဆိုလားပဲ) ၇ပ်ကွက်ထဲမှာလည်း ခဗျားလေးတို့ ရဲ့ ကျေးဇူးတော်သီချင်း တွေ နားမခံသာအောင် ဂစ်တာကြီး ဂေါင်ဂေါင်ဂေါင်ဂေါင်နဲ့ ဆိုနေကြတာ ဘယ်အစိုးရ ၊ရယက ကများလာတားသလဲဆိုတာလေး ပြောပေးပါဦး
Thanksgiving(ကျေးဇူးတော်နေ့) ဟာ.. အမေရိကာနဲ့ကနေဒါမှာသာကျင်းပါတဲ့.. အရင်ရှိနှင့်နေသူ.. နေးတစ်(တိုင်းရင်းသား)တွေကို.. နောက်ရောက်လာသူ(ဥရောပသား)တွေက.. အကူအညီပေးကြွေးမွေးစာင့်ရှောက်တာတွေအတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရင်း လုပ်ပေးတဲ့ ပွဲတော်သာဖြစ်ကြောင်းပါနော..
အဲဒီနေ့မှာ.. ဗမာက…တိုင်းရင်းသားတွေ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြီး လက်ဆောင်ပေး.. တိုင်းရင်းသားတွေကလည်း ဗမာတွေပြန်ပြော..လက်ဆောင်ပေး..ကြွေးမွေး.. မကောင်းဘူးလား..
Thanksgiving Day isaholiday celebrated primarily in the United States and Canada. Thanksgiving is celebrated each year on the second Monday of October in Canada and on the fourth Thursday of November in the United States. Because of the longstanding traditions of the holiday, the celebration often extends to the weekend that falls closest to the day it is celebrated.
The claim of where the first Thanksgiving was held in the United States, and even the Americas, has often beenasubject of debate. Author and teacher Robyn Gioia and Michael Gannon of the University of Florida have argued that the earliest attested “Thanksgiving” celebration in what is now the United States was celebrated by the Spanish on September 8, 1565, in what is now Saint Augustine, Florida.
ဟီ…ဟိ.. အနေအထိုင်မတတ်တော့ အပြောခံရဘီ…
ကျတော်က ဘုန်းဘုန်း ၀ီရသူ ကို ငယ်ငယ်ကတည်းက ကြည်ညိုလို့ဝီရံသူလို့နာမည်တပ်ထားတာပါ(သူ့နာမည်အတိုင်းယူရင် သူ့ကို ရိုင်းရာကျမှာစိုးလို့ ပါခဗျာ.)
အဲဒီဘုန်းဘုန်းကို မိုးကုတ်မှာတုန်းက ဆွမ်းတောင်ကပ်ခဲ့ရပါသေးတယ်
အင်္ဂလိပ်လိုဆို we ra thu မှ ၀ီရသူပါ
အခုက we ren (ရမ်) လို့ အသံထွက်ပါခဗျာ…
.နောက် ကျတော်က ဗမာမပာုတ်ပါဘူးခဗျာ… ရှမ်းစစ်စစ်ပါ….( ဒါပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား…)
ဘုန်းဘုန်း ၀ရသာမိကိုတော့ သူငယ်ချင်းတွေပြောလို့ ကြားဖူးထားပါတယ်ခဗျာ….
ဟုတ်ပါပြီ ဆြာလေး ..
နာမည် ယူထားတာလည်း ဘုန်းကြီးနာမည် adapt လုပ်ထားတာ …
မန့်လိုက်တော့လည်း ဘာသာရေး ပိုစ့်တွေ ချည်း….
တင်ထားတဲ့ ပုံကျတော့…ကောင်မလေးတယောက် ရေကူးကန်ထဲမှာ ….
ခင်လို့အကြံပေးမယ် ….တခုခုတော့ ပြင်လိုက်ပါဗျာ….
ဆေးကျောင်း။ ရေကြောင်း. gtc သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ ခဗျားလေးတို့ တွေအများကြီးပါ အဆိုတော်တွေထဲမှာလည်း phyu phyu kyaw thein တို့ l sai zi တို့ ကို များ buddhist မပာုတ်လို့ဆိုခွင့် ပိတ်တယ်လို့ လည်း မကြားမိပေါင်း( ကျတော်ပဲ ဗပာုသုတ မရှိလို့ နေမှာပါ)
ဘုန်းဘုန်း ၀ိရသူ နာမည် နဲ့ ပဲ(ဘုန်းဘုန်းဝိရသူက အာဏာရှင်လက်ချက်နဲ့ တောရဆောက်တည်နေတာ) ဦးဇင်းဝရသာမိ ထင်ပါရဲ့ ( ရမ်းထုတ်ခြင်း)
ဖက်ဒရယ် ဘက်ကမန့်ရင်ကောင်းမလား …
minority tribes တွေရဲ့ human right ဘက်က မန့်ရင်ကောင်းမလား
ဟိုတလောက ဟော့သွားတဲ့ ယိုးဒယားဂျာ ဆိုပီး
သဂျီးမင်း…….. ဟီးဟီးးး သဂျီးမင်း……………
သဂျီးမင်းကလေ ကျနော့်ကို ကျိတ်ပီးကြိုက်နေတဲ့ ;)
ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့ရင်ထဲက အချစ်နဲ့ တူဒယ် .. ဟဲဟဲ
လက်ရှိ ဒု သမတ တယောက်က ရှမ်းပါ၊
post လုပ်တဲ့သူက မြန်မာပြည်မှာ မနေဘူး နဲ့တူတယ်၊ဗမာ လဲတကယ် ဟုတ်ဟန်မတူဘူး၊
ဗိုလ်သင်တန်း တက်ခဲ့တဲ့ တိုင်းရင်းသား သူငယ်ချင်း၊မိတ်ဆွေတွေ လဲ အများကြီးပါဘဲ။
သုံးရောင်ချယ် ကိုယ်ဆရာ့ရေ ဒုတိယ သမ္မတကို တိုင်းရင်သားမဖြစ်ရပါဘူးလို့ ကျနော်စာထဲမှာ မရေးထားရကြောင်းပါ ဖြစ်နိုင် မဖြစ်နိုင်ဆွေးနွေးကြတယ်ဆိုပဲ ဆိုထားပါတယ် ( စာသေချာပြန်ဖတ်ပါ) နောက် ကိုယ့်ဆရာ သူငယ်ချင်း ဗိုလ်သင်တန်းဆင်းတွေက ဘယ်နှစ်က ပါလည်း ဖြစ်နိုင်ရင် ဟိုးအရင်ကဟာတော့ မပြောနဲ့နော် မျက်မှောက်ခေတ်ဗိုလ်သင်တန်းဆင်း ရှိတယ်ဆို အပတ်စဉ်လေးရယ် ဘာတိုင်းရင်းသားဆိုတာ သိခွင့်ရှိမလား ကျနော်မြန်မာပြည်မှာမနေဘူး ဗမာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ဘာအထောက်ထားနဲ့ ပြောတာလည်း ခင်ဗျာ အညာသား စစ်စစ်ပါခင်ဗျာ ရန်ကုန်ကြည်မြင့်တိုင် နေပါတယ် ဆွေးနွေးချင် ကြိုဆိုပါတယ်
တိုင်းရင်းသားတွေ ဗိုလ်သင်တန်းတက်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတာတော့ မမှန်ကြောင်းဦးစွာပြောလိုပါတယ်.. DSA အပါတ်စဉ် ၄၆ ဆင်းတွေထဲမှာ တိုင်းရင်းသားတွေလဲ ပါတာပါပဲ.. ခုဆိုရုရှားမှာတောင် ရောက်နေကြသူတွေရှိတယ်.. ပြန်တမ်းဝင်အမှတ် ကြည်း-၃၇… တွေပေါ့လေ။ ဆိုတော့ကာ.. ဘာကြောင့်မို့လို့ တိုင်းရင်းသားတွေ ဗိုလ်သင်တန်းတက်ခွင့်မရဘူးလို့ ထင်စရာဖြစ်လောက်အောင် ဗိုလ်တွေထဲမှာ တိုင်းရင်းသားတွေ ဘာကြောင့်နည်းနေရလဲဆိုတာက စပြောမှဖြစ်မယ်ထင်တယ်။
ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း အတော်များများကပေါ့ဗျာ..
စစ်တပ်ဆိုတာ၊ စစ်သားဆိုတာ တိုင်းရင်းသားတွေပါးစပ်ဖျားမှာ အထင်ကြီးအားကျစရာ၊ လေးစားစရာယောကျာ်းတွေအနေနဲ့ သားမက်တော်ချင်ကြသူတွေ မနည်းဘူး။ ဘယ်နယ်ရောက်ရောက် လူတိုင်းက လေးစားသမှုရှိကြတယ်၊ အားကျ ကျတယ်။ အဲလိုနဲ့ အရွယ်ရောက်လာတဲ့ ယောကျာ်းလေးတွေ (တိုင်းရင်းသားတွေ အတော်များများပေါ့) တပ်ထဲ ၀င်လာကြတယ်။ မယုံရင် L ခွန်းရီအဖေ ဘာလဲပြန်ကြည့်။ အဲဒီမှာ တိုင်းရင်းသားတွေချည်း စုဖွဲ့ပြီး သေနတ်ကိုင်တပ်ရင်း (သနက) တွေ ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့တယ်။ လက်အောက်ခံ ရဲဘော်ကစလို့ တပ်ရင်းမှူးထိ တူရာတူရာ တိုင်းရင်းသားတွေချည်းပဲ။ ကွန်မြူနစ်တွေ ကြီးစိုးလာတဲ့အချိန်၊ ရန်ကုန်အစိုးရလို့ ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခံရတဲ့ ဦးနေ၀င်းအစိုးရဖြစ်အောင်လို့ လုပ်ခဲ့တာကလဲ အဲဒီအချိန်တုန်းက သနက တပ်တွေ တောခိုသွားတာကြောင့်လဲဖြစ်တယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ စစ်တပ်မှာ တိုင်းရင်းသားဆို မယုံရဲတော့တဲ့သဘော သက်ရောက်သွားတယ်။ အဲဒါတွေနောက်ပိုင်း၊ ဦးနေ၀င်းအစိုးရတက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ စစ်တပ်ထဲမှာ ABC ဘယ်တော့မှ မကြီးပွားဆိုတာ ပြောစကားဖြစ်လာခဲ့တယ်။ A ဆိုတာကတော့ AIDS လို့ပြောတဲ့ ဆေးအဆင့်ချခံရတဲ့သူတွေ၊ B ဆိုတာကတော့ ၂၀၀၁ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ဗိုလ်သင်တန်းကျောင်းဆင်း ဗိုလ်ပြုတ်တွေ ချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်တဲ့ အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီပိုး၊ C ဆိုတာကတော့ ခရစ်ယာန် လို့ ယေဘူယျသတ်မှတ်တဲ့ ဘာသာခြားတွေ၊ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ တပ်မတော်မှာ ရာထူးထပ်မတိုးနိုင်ပါဘူး။ အလွန်ဆုံးပေးလှ Captain ပေါ့၊ စီနီယာကြီးတွေဘ၀နဲ့ပဲ သင်တန်းကျောင်းတွေအပို့ခံရပြီး နောက်ဆုံးပင်စင်စားသွားရကြတာပါပဲ။ ဒါတွေကို တစ်ဆင့်စကား တစ်ဆင့်နားနဲ့ ကြားလာရတော့ ဘယ်တိုင်းရင်းသားတွေမှ စစ်ထဲ မ၀င်လိုကြတော့ဘူး။
တစ်ခြားတစ်ဖက်မှာလဲ စစ်သားဆိုတာကို အမြင်တွေပြောင်းလာကြတဲ့အတွက်ရယ်၊ တစ်ခြားရေမြေတွေမှာ အလုပ်သွားလုပ်တာမှ ချမ်းသာလွယ်တယ်ဆိုတာရယ်ကြောင့်ရယ်၊ တစ်ချို့ တစ်ချို့သော အကြောင်းကြောင်းတွေရယ်ကြောင့်ပေါ့၊ စစ်ဗိုလ်တွေထဲမှာ တိုင်းရင်းသားတွေ မတွေ့ရခြင်းလို့ မြင်မိတယ်။
ကျုပ်ကိုယ်တိုင်တောင် ရှမ်းဖြစ်ပါလျက်နဲ့ ဖောင်ဖြည့်တုန်းက ဗမာလို့ ဖြည့်ခဲ့ရဖူးတယ်။ နောင်ရေးကောင်းအောင်လို့တဲ့ အဖေကပြောတာပဲ။ ဒါပေမယ့်လည်း လှမ်း ပုံစံတွေမှာကျတော့ ဘယ်လိုမှ ညာမရတော့လို့ ကျုပ်သည်လည်းဘဲ…. ထိုနည်းလည်းကောင်း………
(လနက)တွေ က ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက ဟာတွေ နောက် ရန်ကုန်အစိုးရလို့ အပြောခံရတာ ပထစ လက်ထပ် ဗျ နေ၀င်းလက်ထက်မဟုတ်ဘူး တိုင်းရင်းသာတွေ ရှိတယ် အခု ရှိတယ် ဆိုတာ သိရတော့ ကျေးဇူးပဲ ကျနော်မှားပါတယ် န၀တ လက်ထက်အထိ ကို ဗိုလ်ချုပ် အေဘယ် ရှိသေး
အင်းစိန်တိုက်ပွဲမှာ ချင်း လနက က ရန်ကုန်ကို ကာကွယ်ပေးသွားတာတွေ ရှိတယ်။ နယ်ချဲ စနစ် ကိုပဲ ပြောရမလား မြန်မာအစိုးရ ပဲ ပြောရမလား မသိတော့ ပါဘူးခင်ဗျာ
ကိုယ်ဆရာ့ က ဗိုလ် ထင်ပါရဲ့ ဒီလို ပြောပြထာကျေးဇူးပါ ရှမ်း ဖြစ်လျက် ဗမာ ဆိုပြီး ရေးလိုက် ရတာလေး က ခံစားရတယ်ဗျာ လေးစားပါတယ်
ဒီဆိုက်ထဲမှာသေသေချာချာ ကျကျနန ရှင်းပြနိုင်တဲ့ ဦးဖောရယ်၊ လေတပ်ထွက် Captain America ရယ်ရှိတယ်။ သူတို့တွေ ဘယ်ရောက်နေကြလဲ? CIA က သူကြီး ဥကိုင်ရော ၀င်ရှင်းပြသင့်တယ်ထင်ပါတယ်။ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကြတဲ့သဘောပေါ့။
– ပင်လုံညီလာခံထက်ကြီးတဲ့.. ညီလာခံတခုကျင်းပပြီး.. စာချုပ်ချုပ်…။
– ပြည်နယ်တွေ.. လူမျိုးအမည်နဲ့တွဲထားတာဖျောက်..။(ဥပမာ – ရခိုင်ပြည်နယ်မဟုတ်ပဲ.. အနောက်ကမ်းပြည်နယ်..)
– ပြည်နယ် မြေပုံကို.. လူဦးရေအချိုးအစား+. လတ္တီတွဒ်လောင်ဂျီတွဒ်နဲ့.. မျှပြီး..ညီညီလေး ခွဲစိတ်..။
– ကျေးဇူးတော်နေ့လုပ်ပြီး.. လူမျိုးတွေအတူတကွယှဉ်တွဲနေနိုင်အောင် နေရာချရွေ့ပြောင်း.
– လက်နက်ကို.. (တပြည်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့).မည်သူမဆို.. လိုင်စင်ထားကိုင်လို့ရအောင်လုပ်ပေး..။
three colors နှင့် Mg Ogga တို့ ၏ ဆက်လက်ဆွေးနွေးကြမည့် အကြောင်းအရာများ ကို စောင့်မျှော်နေပါကြောင်း
Mg Ogga ရေ….. ကျေးဇူးအရမ်းတင်တယ်ဗျာ။
ကျနော်ပြောချင်နေတဲ့ စကားတွေ ကျနော်မပြောတတ်တဲ့ စကားလုံးတွေကျနော့် ကိုယ်စားပြောပေးလိုက်တယ်
လိုက်တယ်လို့ ကို ခံစားလိုက်ရပါတယ်။
တိုင်းရင်းသားတွေ ခံစားနေရတဲ့ ခံစားချက်တွေကို မြေပြန့် နေဗမာလူမျိုးတွေကို သိစေချင်တယ်။
ကိုဥဂ္ဂါရဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေအပေါ်ထားရှိတဲ့ စေတနာကို လေးစားပါတယ်…။
လွတ်လပ်ရေးမရခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့လို့ အချင်းချင်းနားလည်မှုရရှိပြီး ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ လွတ်လပ်ရေးရခဲ့တာပါ…။
နို့မဟုတ်ရင် မြန်မာပြည်မြေပုံက ခပ်သေးသေးနဲ့ ပုံတစ်မျိုးဖြစ်နေမှာပါ..။
ဗိုလ်ချုပ်တို့ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ ၁၉၄၇ အခြေခံဥပဒေအရ ပါလီမန်မှာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်နဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအလိုက် နေရာသတ်မှတ်ပေးတဲ့ လူမျိုးစုလွှတ်တော်ဆိုပြီး လွှတ်တော်(၂)ခုရှိပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံးသမ္မတရာထူးအတွက် ရှမ်းလူမျိုးကို ပေးခဲ့ပြီး စစ်ဦးစီးချုပ်အတွက် ကရင်လူမျိုးကို ပေးခဲ့ပါတယ်..။
လွတ်လပ်ရေးရစက အရပ်ဘက်နဲ့ စစ်ဘက်ဝန်ထမ်းတွေမှာ ကပြားများအပါအ၀င် လူမျိုးစုံ၊ ဘာသာစုံပါတာတွေ့ရပါတယ်…။ နောက်ပိုင်းမှာ လူမျိုးဘာသာခွဲခြားမှုတွေရှိလာပြီး တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေ ဆုံးရှုံးကာ ယုံကြည်မှုတွေလျော့နည်းလာခဲ့ပါတယ်..။
၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေဟာ စစ်တပ်အုပ်စုကဘဲ အာဏာကိုလက်ဝါးကြီးအုပ်ထားဖို့ ကြံရွယ်ရေးဆွဲထားလို့ (ဗမာအပါအ၀င်) ကျန်တိုင်းရင်းသား ပြည်သူတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး..။
တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကို ထိန်းချုပ်ထားမယ်၊ သူတို့ရဲ့သယံဇာတတွေကို လက်ဝါးကြီးအုပ်သိမ်းယူပြီး သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကို လစ်လျူရှုထားမယ်၊ အင်အားနဲ့ အနိုင်ကျင့်နေဦးမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ တစ်ချိန်ချိန်မှာ ပြိုကွဲသွားနိုင်ပါတယ်..။
ကျွန်တော်တို့ ဗမာတွေအနေနဲ့ ကျန်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ခံစားချက်ကို စာနာ နားလည်ပြီး၊ သူတို့အကျိုးစီးပွားအတွက် မျှမျှတတဆောင်ရွက်ပေးဖို့ လိုပါတယ်..။
ဟုတ်ပါတယ် အကိုThanlwinoo ရေ ဖဆပလ ခေတ်က သမ္မတ စပ်ရွှေသိုက် နဲ့ စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်စမစ်ဒွန်း တင်မက စောစံဖိုးသင် တို့ဘာ ၀န်ကြီးဖြစ်တယ်။နောက် မဆလ ခေတ်မှာလည်း နဲနဲ တိုင်းရင်သားနဲ့ ဗမာဆိုပြီးကွဲလာတယ်ဗျ မဆလမှာတောင် အောင်ဆန်းသူရိယ ဗိုလ်တိုက်ချွန်း က ချင်းလေ နောက် စောဘဦးတို့ တွေ ကွဲထွက် နောက် ကချင်က ဘရန်ဆိုင်းတို့တွေ အသီးသီး လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ကုန်ကြရော ခက်တာက မြေပြန့်နေတဲ့ ဗမာ အတော်အများ ဒီကိစ္စကို မသိကြတာ ပထ၀ီ အနေအထားရ ဆက်သွယ်ဖို့ ခက်တာကိုး တိုင်းရင်သာတွေ က လည်း အုပ်ချုပ်သူနဲ့ ဗမာ ဆိုတာကို တွဲမြင်လိုက်ကြတော့ ပိုဆိုးကော တကယ်တော့ ဗမာ လူအများစုကော တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုကော အာဏာရှင်အောက်မှာ အတူဒုက္ခ ခံရတာပါ ကျနော်တို့ ရန်သူက အာဏာရှင် စနစ်ပါ အဓိက ကျနော်တို့တွေ အားလုံး စည်းလုံးပြီး အတူတကွ ရပ်တည် ဖို့ ပါပဲ ကျေးဇူးပါ အကိုရေ
ဆေးလိပ်လည်းတို နေလည်း အတော်ညိ်ု ပါ့ပီ အတိတ်ပြောရတာနဲ့ မောထွာ ဧည်သည်ကြီး မဟုတ်တဲ့ ဘီလူကြီးရေ
မချစ်ဘူး ပြောပီးသူကချည်းးးး ဖက်ဖက်နမ်းနေတော့ဒါဘဲ…….. အဟီးး
သေချာဒယ် ဒီချစ်သူက လုံးဝမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ ရခိုင်ကုလားပဲနေမယ် ……………
မြန်မာပြည်မှာဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်းတွေကို.. လိုက်ရှာနေလို့ဗျာ…။
၁၉၃၀ မေလ ၂၆ ကုလားဗမာအဓိကရုဏ်း ( ဆိပ်ကမ်းအလုပ်သမား ပြဿနာမှစ)
၁၉၃၈ ဇူလိုင်လ ၂၆ ကုလားဗမာအဓိကရုဏ်း ( မော်လ၀ီနှင့်ယောဂီ စာအုပ် ပြဿနာမှစ)
အင်္ဂလိပ်လက်ထက် ၁၉၃၁ခုနှစ်ဇန်န၀ါရီလ ၂ရက်နေတွင် ခေါက်ဆွဲဆိုင်စကားများမှုမှပြီး တရုတ်-ဗမာ အဓိကရုဏ်ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည်။
၁၉၆၇ ခုနှစ်တွင် မော်စီတုံးရင်ထိုးတံဆိပ်ပြဿနာမှစပြီး တရုတ်-ဗမာ အဓိကရုဏ်ဖြစ်ခဲ့သေးသည်။
အင်္ဂလိပ်အထွက်..ဂျပန်အ၀င်ခေတ်တွင်.. မြန်မာပြည် အရှေ့တော်ပိုင်ရှိ ကော့ကရိတ်နှင့် ဖါပွန်နယ်၊ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်မြောင်းမြခရိုင်တွင် ဘီအိုင်အေတပ်များသည် လက်နက်နှင့် အာဏာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး အနိုင်ကျင့်ခြင်း၊ မြောင်းမြမြို့ပေါ်ရှိ ကရင်ဝန်ကြီး ဟောင်း စောဖေသာနှင့် ၎င်း၏ဇနီးအပါဝင် ကရင်များအား လုယက်တိုက်ခိုက်၊ သတ်ဖြတ်ရာမှ ကရင်ဗမာ လူသတ်ပွဲကြီးဖြစ် လာသည်။
၁၉၈၈ မှာထင်တယ်.. ရက်မမှတ်မိလို့.. ပြည်ဖက်ကနေစပြီး.. ကုလားဗမာ အဓိကရုဏ်း(ဖန်တီး)ဖြစ်ခဲ့တယ်ထင်တာပဲ..
ဟင်- 2006 လောက်မှာဖြစ်တဲ့
တောင်ငူက ကုလား-ဗမာ အဓိကရုဏ်းက အကြီးကြီးပဲလေ။
မွတ်ဆလင်ကုလားတွေနဲ့ဖြစ်တာဆိုပေမယ့် ဟိန္ဒူကုလားတွေပါ ပြေးလွှားရှောင်တိမ်းရတယ်။
စီမံကိန်းဝင်းထဲက ဘူဒိုဇာကိုတက်မောင်းပြီး ဗလီတွေကိုဖြိုတယ်။
ရေစင်ပေါ်က ရေတိုင်ကီထဲဝင်ပုန်းရင်း ရေနစ်သေရရှာတယ်။
သေကြေထိခိုက်ခံစားရတဲ့ ဗမာတွေ ကုလားတွေ အများကြီးပဲ။ (အဲဒါအားလုံး လူတွေပဲဖြစ်တယ်)
ကျုပ်က ခုနှစ်တွေ ရက်စွဲတွေတော့ မမှတ်မိဘူး…
(အဲဒါကြောင့် အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်းမှာ ရှေးရှေးတုန်းက အဓိကရုဏ်းတွေပဲရေးတော့ ဘာလို့ ခေတ်သစ်အဓိကရုဏ်းတွေ ချန်ထားပါလိမ့် လို့ စဉ်းစားနေတာ)
လူမျိုးကြီးဝါ ဒတော့ မသိဘူး.. ကိုယ်ကျိုးကြည့်ဝါဒ တော့ ရှိတာ အမှန်ဘဲ .. ဗျို့